Kedu ihe mgbazinye ego efu pụtara? Nkọwa okwu nke ụkọ ego
Malite mgbazinye ego Wiki Ego mgbazinye
1 Ego mgbazinye
1.1 Ụdị abụọ nke mbinye ego na-adịghị mma
1.1.1 Ụkpụrụ nke ego mgbazinye ego maka ego mgbazinye ụlọ
1.1.1.1 Ọrụ nke onye na-agbaziri ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ ego maka ụlọ
1.1.2 Ụkpụrụ nke ego mgbazinye ego maka ndị na-akpata obere ego
1.1.2.1 Ọrụ nke onye na-agbaziri agbaziri n'ihe gbasara ego eji akwụ ụgwọ maka ndị na-akwụ ụgwọ
1.3 Njikọ njikọ:
a Ego mgbazinye na-ekwuputa otu mbinye ego nke onye na-agbaziri ego ga-akwụ ụgwọ dị ala karịa ego ọ gbazinyere ruo mgbe okwu ahụ gwụrụ. Nke a dị ezigbo mma maka onye na-agbaziri ego, ma dịka ihe niile dị ndụ, njirimara na-akwụ ụgwọ nwere ụfọdụ uru na ọghọm. Ya mere, tupu ị gụsịrị akwụkwọ, ị ga-elekwasị anya na uru na nkwekọrịta.
Ụdị abụọ nke mbinye ego na-adịghị mma
N'ihe gbasara ego mbinye ego ụlọ, a marala oge maka oge.
Otú ọ dị, n'oge na-adịbeghị anya, enwerekwa ụdị nke abụọ nke mbinye ego na-adịghị mma, bụ nke bara uru karịsịa maka obere ego. Iji nweta ndị ahịa ọhụrụ ma kee ha agbụ ruo ogologo oge, ọ bụghị nanị na ụlọ akụ ga-ahapụ mmasị na obere mgbazinye ego gaa na 1000 Euro, kamakwa itinye ha n'ọnọdụ ọjọọ. Onyinye na-adịghị mma bilitere.
Ụkpụrụ nke ego mgbazinye ego maka ego mgbazinye ụlọ
Ọ bụrụ na ị na-achọ maka ego mgbazinye ụlọ n'ụlọ akụ ma ọ bụ onye ọzọ na-agbazinye ego, ị ghaghị ịkwụ ụgwọ mmasị na ụgwọ ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ maka notary na ntinye aha ntinye ala, na mgbakwunye na ego agbaziri. N'ihe banyere mgbazinye elu karịa ọnụ ọgụgụ nke 15 ọtụtụ puku euro, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-agbazinye ego nwere ike ịdenye aha ha n'akwụkwọ ndekọ ala ka ha wee nweta akwụmụgwọ ka ha nwee ego ha ma ọ bụrụ na onye ahụ gbazitere ego. Enwere ihe onwunwe nke onye nwe ya dị ka nkwa.
Ma, ọ bụrụ na onye mgbazinye chọrọ nanị otu ego mbinye ego ụlọ, nke na-erughị 15 puku, onye na-agbazinye ego nwere ike ịbanye na ntinye ala. Ebe ọ bụ na ndebanye aha ala na ụgwọ akwụkwọ a na-achọ maka ụgwọ a na-akwụ ụgwọ ọnụahịa, ha na-akwụ ụgwọ. Ihe nkwụnye ego ugbu a na - akpata mbinye ego.
Ọrụ nke onye na-agbaziri ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ ego maka ụlọ
Otú ọ dị, ọ bụrụ na onye na-agbaziri ụgwọ na-ezute ọnọdụ ma nara ego nkwụnye ụgwọ na njikọ ego nke ụlọ, ọ ghaghị ịkwado ụfọdụ njirisi. Nke a na-agụnye, n'ezie, ezigbo ego kwesịrị ekwesị na ego na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide. Ọzọkwa, ruo mgbe mmezigharị nke mgbazinye ego ahụ, ọ nwere ike ọ gaghị emejọ ma ọ bụ ọbụna ịchụ ihe onwunwe ya na-enweghị ihe ọmụma nke onye ahụ ji ụgwọ. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ike ịnye ndị nwe ụgwọ ndị ọzọ ala ahụ ka ọ bụrụ ihe nkwado. N'ikpeazụ, a ghaghị edebanye ikikere ikike maka onye na-akwụ ụgwọ, ma ọ bụrụ na onye ikpeazụ ahụ arịọ.
Ụkpụrụ nke ego mgbazinye ego maka ndị na-akpata obere ego
Na nke a, onye gbaziri ego aghaghị ịkwụ ụgwọ ego karịa ego ọ gbaziri. Ugbu a, a na-enye ego mgbazinye ego na arụ ọrụ na njedebe na-ezighị ezi nke 0,4 percent. Nke ahụ pụtara na na a ego ego nke 1000 Euro ga-akwụcha naanị na 994 Euro. Otú ọ dị, maka ego nke 6 Euro, onye na-agbaziri ego aghaghị ime ọtụtụ ihe.
Ọrụ nke onye na-agbaziri agbaziri n'ihe gbasara ego eji akwụ ụgwọ maka ndị na-akwụ ụgwọ
Na mbido mbụ, ụdị nke mbinye ego a kwụsịrị ịbụ azụmahịa na-adịghị mma maka ụlọ akụ ahụ, n'ihi na ọ na-emezigharị karịa ya. Ihe kpatara ego ndị ahụ ka na-enweta uru ma ọ bụrụ na ha na-akwụ ụgwọ ego na-adịghị mma site n'omume ndị mmadụ. Ndị ahịa ndị nwere ezigbo ahụmahụ na onye na-agbazinye ego na-alọtakarị. Tụkwasị na nke ahụ, a na-emepe ụzọ mgbochi tupu a kwụọ ụgwọ ọhụụ ọhụrụ, ma ọ bụrụ na nkwụsị mbụ nke nkwụsịgwụ ga-adị mfe. A na-agbakwunye ndị ahịa na ụlọ ọrụ ego ma laghachi azụ na njedebe. Mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta ego "nkịtị," nke ga-akwụ ụgwọ ọzọ. Ụlọ ọrụ ego ahụ nwere ike ime ka ndị mmadụ ghara ịnara ego n'ọnọdụ nkịtị.
Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ego na-adọta mmasị na njirimara nke onye ahịa. Iji nweta ego mgbochi, ị ghaghị itinye eziokwu niile dị na tebụl. N'ihi ya, ndị na-eri ihe na-adọ aka ná ntị megide ụdị ịgbazinye ego a.
Site na mbinye ego, onye gbaziri ego nwere ike ịchekwa ego. Enweghị ụgwọ nkwụnye ego zoro ezo. Otú ọ dị, ọ ghaghị igosipụta ego ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ụkpụrụ nke ịkwụ ụgwọ ọjọọ, ị nwekwara ike ịchọpụta banyere vidiyo.
Isiokwu bu nke aebu-n'elu
Isiokwu ọzọKwa ọnwa